Ithegi: ipodcasting | Martech Zone
Isasazwe: Isisombululo sokuThengisa isiQinisekiso soMxholo weeShishini zeShishini
NgoLwesine, Meyi 6, 2021 NgoLwesibini, Meyi 11, 2021 ULindsay Tjepkema
Iphuhlisiwe ukusuka kwimbono yokuba iincoko kufuneka zibe zi-throughline kuwo wonke umxholo wokuthengisa, i-Casted kuphela kwento yokuthengisa umxholo eyakhelwe ukuxhobisa abathengisi ukuba bafikelele, bandise, kwaye babonise umxholo wabo wohlobo lwe-podcast ukuhambisa iqhinga labo lokuthengisa. Ngokungafaniyo nezinye izisombululo zokuthengisa umxholo, ezakhelwe ukunceda abathengisi bakhuphe umxholo ngakumbi nangakumbi ngokubhaliweyo, uCasted wenza ukuba abathengisi basebenze ngakumbi kwaye basebenze ngokuthatha indlela yokuqala yokulalelwayo. Kunye nabasiweyo
Apho uza kubamba khona, udibanise, wabelane, ulungiselele, kwaye unyuse iPodcast yakho
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 22, 2021 NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 UThomas Brodbeck
Kunyaka ophelileyo yayingunyaka we-podcasting owaqhuma ngokuthandwa. Ngapha koko, i-21% yabantu baseMelika ngaphezulu kweminyaka eyi-12 bathe bamamela ipodcast kwinyanga ephelileyo, ethe yanda ngokuthe ngcembe unyaka nonyaka ukusuka kwisabelo se-12% ngo-2008 kwaye ndibona eli nani liqhubeka nokukhula. Ngaba uthathe isigqibo sokuqala eyakho ipodcast? Ewe, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele kuqala-apho uza kubamba khona
NgoLwesihlanu, Oktobha 2, 2020 NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 Douglas Karr
Wowu. Ndiyayithanda xa umntu eyila uluhlu lokutshekisha kwi-infographic elula nefundisayo. Uphengululo lweWebhu yase-UK luyile le infographic ukuphuhlisa uluhlu lweempawu abakholelwa ukuba kufuneka zibandakanywe kuwo onke amashishini 'kubukho kwi-Intanethi. Ukuze ishishini lakho liphumelele kwi-Intanethi kuya kufuneka uqiniseke ukuba iwebhusayithi yakho ipakishwe! Zininzi iinkcukacha ezincinci ezinokuthi zenze umahluko-kokubini ngokunika abathengi